ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုလိင်ကွဲပြားမှု: neuroimaging လေ့လာမှုများကို meta-analysis (2012) - Your Brain On Porn
Neuropsychologia ။ 2012 Jun;50(7):1578-93. doi: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.03.011.
Stevens JS1, Hamann က S.
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အမြင်ထဲမှာသိသိသာသာလိင်ကွဲပြားမှုယခင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် psychophysiological လေ့လာမှုများအစီရင်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အမြိုးသမီးမြားအနှုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်တဲ့လိင်ခြားနားချက်ပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ရန်တွေ့ပါပြီ။ အတော်လေးအနည်းငယ် neuroimaging လေ့လာမှုများဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပါပြီအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်အရာတွေဖြစ်တဲ့လိင်ကွဲပြားမှုဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ကို Activation အတွက်သက်ဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုတွင်ထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်မှအတိုင်းအတာသို့သော်တစ်ဦးအဓိကအားမဖြေရှင်းနိုင်ပြဿနာဖြစ်နေဆဲပင်။ ဒီနေရာမှာ neuroimaging လေ့လာမှုများတစ်အရေအတွက် Meta-analysis သည်ပို့ချခြင်းဖြင့်ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသာအမျိုးသမီးများကိုလေ့လာကြောင်းလေ့လာချက်များ၏အများကြီးပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကနှင့်အတူလိင်ကွဲပြားမှုလေ့လာထားတဲ့စိတ်ခံစားမှုလေ့လာမှုများပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုပုံသိသိသာသာကြိုတင်လေ့လာမှုများမှဆွေမျိုးလိင်ကွဲပြားမှု detect လုပ်ဖို့စာရင်းအင်းပါဝါကိုတိုးမြှင့်နိုင်ခဲ့တယ် သို့မဟုတ်လူတို့သညျ။ ကျနော်တို့ Non-စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုမှဆွေမျိုးစိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ရူးနှမ်းဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ကို Activation များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခု activation ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းချဉ်းကပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ပေါင်းစပ်အားလုံးစိတ်ခံစားမှုဆန်းစစ်ဖို့အပြင်, အနုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်ခံစားမှုအဘို့အသီးခြားစီလိင်ကွဲပြားမှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ လိင်ကွဲပြားမှုအနှုတ်လက္ခဏာနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလေ့လာမှုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြား။ ယောက်ျားမျက်နှာသာလိင်ကွဲပြားမှုများ၏အများစုအပြုသဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့ရှုလေ့လာခဲ့ကြသော်လည်းအမျိုးသမီးတွေမျက်နှာသာလိင်ကွဲပြားမှုများ၏အများစု, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဤသည် valence-specific အဆိုပါ amygdala များအတွက်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့, အမျိုးသမီးများလက်ဝဲ thalamus, hypothalamus, mammillary အလောင်းတွေ, လက်ဝဲ caudate အပါအဝင်လက်ဝဲ amygdala အတွက်အဖြစ်ကိုအခြားဒေသများအတွက်ယောက်ျားထက် သာ. ကြီးမြတ် activation ပြနှင့် prefrontal cortex medial ။ ဆနျ့ကငျြ, အပြုသဘောစိတ်လှုပ်ရှားမှုအဘို့, ယောက်ျားလက်ဝဲ amygdala အတွင်းအမျိုးသမီးများထက် သာ. ကြီးမြတ် activation ပြအဖြစ်နှစ်နိုင်ငံယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus နှင့်ညာဘက် fusiform gyrus အပါအဝင်အခြားဒေသများအတွက် သာ. ကြီးမြတ် activation ။ ဤရွေ့ကား Meta-analysis သည်တွေ့ရှိချက် amygdala, စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် key ကိုဒေသ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation အတွက် valence-မှီခိုလိင်ကွဲပြားမှုထားပါတယ်သော။ ညွှန်ပြ မိန်းမတို့အဘို့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖို့ သာ. ကြီးမြတ်လက်ဝဲ amygdala တုံ့ပြန်မှုအမျိုးသမီးတွေကိုအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်၏တိုးလာပျံ့နှံ့ဖို့တိုးလာ neurobiological reactivity ကိုအကြားယူဆချက်လင့်များနှင့်ပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူညီ။ အမျိုးသားများတွင်အပြုသဘောဆောင်စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် သာ. ကြီးမြတ်လက်ဝဲ amygdala activation ၏တွေ့ရှိချက်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုများ၏တိကျသောအမျိုးအစားများများအတွက်ယောက်ျားဘို့ယခင်ကအစီရင်ခံ သာ. ကြီးမြတ် amygdala တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းပိုပြီးယေဘုယျအားဖြင့်အပြုသဘောလှုံ့ဆော်မှုမှတိုးချဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ဒီလေ့လာမှုယနေ့အထိအကြီးဆုံးနှင့်စုံဆုံးအရေအတွက် Meta-analysis သည်ပေးခွငျးအားဖွငျ့စိတျလှုပျရှားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation အတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရဲ့အနှစ်သာရကမှကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတိုးချဲ့နှင့်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အအပြုသဘော vs. တစ် function ကိုအဖြစ်လိင်ကွဲပြားမှုဆန်းစစ် အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence ။